Ahoana ny fomba handefasana antso vonjy maika amin'ny findainao | Androidsis
Ahoana ny fomba handefasana antso vonjy maika amin'ny findainao
Rafa Rodríguez Ballesteros | | fiarovana, Tutorials
Azo antoka izany isika rehetra dia manana fifandraisana izay manomboka amin'ny «AA» ao amin'ny fandaharam-potoanan'ny smartphone. Heverina fa mifamatotra amin'ireo olona manan-danja amin'ny fandaharam-potoananay. Ity dia zavatra iray izay saika nataontsika rehetra mba hisehoan'ireo mpifidy voafantina ireo eo an-tampon'ny fandaharam-potoananay. Ary izay Nampiasaina izy io, raha sendra lozam-pifamoivoizana na vonjy maika, dia afaka nifandray mora tamin'ilay olona voalaza tamin'ny alàlan'ny telefaoninay izy ireo.
1 Tsy misy dikany intsony ny anarana hoe "AAA" +.
2 Mametraha nomeraon'ny antso vonjy maika rehefa voahidy ny telefaona.
Tsy misy dikany intsony ny anarana hoe "AAA" +.
Saingy ity fitandremana izay nanompo anay taloha ity dia efa tsy ampiasaina intsony. Tsy misy dikany intsony ny fampidirana amin'ireo fifandraisana am-pitokisana "AAA" eo alohan'ilay anarana. Ary na dia izany aza zavatra izay saika natolotray rehetra tamin'ny fampielezan-kevitra nataon'ny Vokovoko Mena ihany. Tsy tsara intsony izao.
Amin'ny terminal ampiasaintsika ankehitriny tsy dia misy dikany firy ny manao fifandraisana aloha raha tsy afaka mamoha telefaona isika. Alao sary an-tsaina vetivety fa mahita ny torana amin'ny olona eny an-dalana isika. Ho fanampin'ny fanoloran-kevitra ireo serivisy vonjy maika mifanaraka amin'izany amin'ny maha olom-pirenena vanona antsika, dia tonga amintsika ny mifandray amin'ny fianakavianao. Mba hanaovana izany dia raisinay ny nomeraon-telefaonin'ilay niharam-boina, fa rehefa te-hitady fifandraisana izahay: «ampidiro ny modely hamaha».
Raha jerena izany dia afaka manao kely isika. Ho sarotra be amintsika ny miditra amin'ireo fifandraisan'ny telefaona miaraka amina kaody na hidin-trano. Fa raha mandinika isika, eo ambanin'ny teboka fotsiny hampahafantarana ny lamina, na ny isa ho an'ny kaody izay milaza hoe «Vonjy taitra». Ny telefaona, na dia misy hidiny aza, dia hamela antsika hanao antso vonjy maika. Saingy araka ny voalaza dia hamela anay hiantso nomeraon'ireo serivisy vonjy maika fotsiny isika. Ahoana anefa raha te hampandre olona iray ao amin'ny fianakaviantsika isika?
Androany amin'ny Androidsis dia hampianarinay anao ny fomba fampifanarahana ny fifandraisana izay tadiavinay ho nomerao vonjy maika. Amin'izany fomba izany, raha misy olona te-hanao antso vonjy maika avy amin'ny finday avo lenta, azony atao ny miantso, ohatra, ny mpiara-miasa amintsika, na ny ray aman-drenintsika, nefa tsy mila miditra amin'ny telefaona terminal. Inona?. Mamaky hatrany.
Mametraha nomeraon'ny antso vonjy maika rehefa voahidy ny telefaona.
Mampalahelo fa tsy toy ny iOS, Android mandra-pahatongan'ny kinova Android farany dia tsy nanana an'io azo atao io. Fa raha mbola tsy nahazo ilay fanavaozana nandrasana hatry ny ela ny smartphone-nao dia manome vahaolana anao ihany koa izahay. Midira amin'ny safidin'ny finday. Avy amin'ny Settings dia mitady Lock Screen izahay. Raha vantany vao ao anaty isika dia tsy maintsy miditra amin'ilay faritra fiarovana. Ary farany miditra isika Fampahalalana an'ny tompona.
Raha vantany vao afaka isika ataovy hita ny mombamomba ny tompony. Ary eo amin'ny saha azo ampidirina ity fampahalalana ity afaka manampy ny nomeraon-telefaona tadiavina izahay. Amin'izany fomba izany dia ho hita eo amin'ny efijery mihidy finday foana ny nomeraon-telefaona voafantina.. Ka raha misy mahita ny findainay dia afaka manampy antsika koa izy hifandray aminao raha mitady ny tompony ianao.
Tato ho ato dia miaro ny angon-drakitra manokana ataonay miaraka amin'ny fahazotoana bebe kokoa ny finday avo lenta. Ary noho izany dia manana karazana hidim-baravarana maro isika. Lalam-endrika tsy azo atao modely, kaody alphanumerika, ary ankehitriny koa ny dian-tànana. Tsy lazaina intsony izay manaraka, famakiana iris na fanekena endrika. Tsara izany rehetra izany mba hitazomana ny data tsy ho voaro. Saingy indraindray dia tsara ny mieritreritra fa indraindray mety mila olona hampiasa finday avo lenta hanampy antsika isika.
Betsaka ny fampiharana fanatanjahan-tena manampy antsika hikarakara ny tenantsika. Ary saika isika rehetra dia manana App mifandraika amin'ny fahasalamana napetraka ao amin'ny fitaovantsika izay ampiasaintsika hitahiry angona. Na koa hahafantarana soritr'aretina na hampihatra fitsaboana. SAINGY Ilaina ny mandray an-tanana ireo tolo-kevitra ireo mba hanampian'ireo finday avo lenta antsika amin'ny tranga maika ihany koa.
Raha ny smartphone-nao dia efa manana kinova Android 7.0 napetraka, azonao atao ny manitsy mivantana ireo laharana vonjy taitra. Ka izay mahita ny findainao dia afaka miantso ny laharana izay namboarinay teo aloha. Fa raha tsy izany dia mety hanampy ny manao fifandraisana iray ho hitan'izy ireo fa azon'izy ireo atrehana raha sendra lozam-pifamoivoizana na fatiantoka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ahoana ny fomba handefasana antso vonjy maika amin'ny findainao
Ny fanitsakitsahana ny patanty eo amin'ny Apple sy Samsung dia miverina amin'ny niandohany
Meizu M5s vonona hiseho amin'ny herinandro ambony